Nagarik Shukrabar - पारसकालको पुनरागमन
बुधबार, ०८ माघ २०७६, १० : २०
बिहिबार, १६ असोज २०७६, ०५ : १८ | प्रजु पन्त
महिला सांसद ज्युहरु,
धेरैलाई लाग्ला किन महिला सांसदको नाममा मात्र यो चीठी लेखियो ? के पुरुष सांसदले महिलाको मुद्धा उठाउनु हुन्न र ?
त्यसो हैन । कुन मुद्धामा कसले कसरी कुरा उठाएको छ भन्ने जानकार छु । महिलाको हरेक मुद्धा संवेदनशील रुपमा उठाउने पुरुष सांसद पनि छन् अनी महिला सांसद भएर भालेवादी सोचाइ राख्नेहरुबारे पनि जानकार छु । यो पत्र तिनलाई लेखीएको हो जो महिला सांसद जो हिजोका दिनमा महिला अधिकार र समानताबारे ठुला कुरा गर्थे ।
अब विषय प्रवेश गरौँ,
तपाईंहरुलाई थाहै छ , संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएपछि चुनाव भयो । लोकप्रिय मत ल्याएर प्रतिनिधी सभामा निवार्चीत कृष्णबहादुर महरा सहजताका साथ प्रतिनीधी सभाको सभामुख भए । आर्थिक रुपमा विवादमा नआएका हैनन् उनी । चुनावताका चिनीयासँग ५० करोड मागेको टेप सार्ववजनिक भएकै हो । लडाकुको शिविरका लागि लिएको रकमको अनियमिततामा परेकै हुन् ।
आम नागरिकलाई उनका ती काण्डको प्रभाव परेन । जनताले पत्याए र उनी सांसदहुँदै सभामुख भए । तर उनको काण्डकारी काम भने रोकिएन । सभामुख जस्तो सम्मानित पदमा आसिन रहेकै बेला उनी बलात्कारको गम्भिर अपराधको आरोपि बने । आरोपी उनी सभामुख रहेको संसद सचिवालयको कर्मचारी मात्रै नभई उनको परिवारसँग समेत निकट सम्बन्ध रहेको महिला रहेको खुलिसक्यो ।
घरबाट निस्केकै छैन, सरुवा भएको रिस पोखेको जस्ता कुतर्क काम नलागेपछि सभामुख पदबाट राजीनामा त दिए, तर कानुनी प्रकृयाभने अवरुद्ध बनाइयो । जसले महराका कर्तुत सार्वजनिक गरेकी छिन् अहिले उनै महिला ‘उनी त मेरा बा जस्ता, मैले भनेकै हैन’ जस्ता अपत्यारिला तर्क गरिरहेकी छिन् । दृष्य प्रष्ट छ, यस्तो भन्ने मुख उनको भए पनि बोलीमा कतै न कतै महराको प्रभाव छ नै ।
उनको शरिरभरी रहेका कुटाईका डाम, बयान बदलिनु अगाडि उनले सार्वजनिक गरेका प्रमाणले नै उनको बदलिएको दावी गलत हो भन्ने प्रष्ट्याउँछ नै । हुँदाहुँदा उनी र श्रीमान्विच छोडपत्रको सहमती भएको कागज समेत सार्वजनिक भइसक्यो । यी सबै घटनाक्रममा महराको शक्तिको प्रयोग भएको संकेतहरु कतै लुकेका छैनन् ।
पीडितले भनेअनुसार उनले घटना लगत्तै उनले तीन महिला नेतालाई घटनाबारे जानकारी गराएकी थिइन्, नेपाली कांग्रेसकी सांसद उमा रेग्मी, नेकपाकी पुर्वसभामुख ओनसरी घर्ति मगर र पुर्व मन्त्री पम्फा भुषाल ।
कांगे्रस नेतृले त फोन आएको स्विकारी सकिन् । तर अन्य २ जना सम्पर्क भएकै छैन भनेर टारिरहेका छन् । पुर्व सभामुख ओनसरी घर्तीले त उल्टो ‘ति केटीले पहिले पनि त्यस्तै भनेको र मानसीक रोगी भएको तर्क गरेर विषयान्तरको प्रयास गरिरहेकी छिन् ।
घर्ति हुन् या भुषाल यी दुबै महिला अधिकारबारे प्रखर मुद्धा उठाएको प्रभावले नै अहिले त्यो स्थानमा पुगेका हुन् । तर अहिले एक महिला चौतर्फी प्रभाव, दवावमा परेर के बोल्ने, के नबोल्ने अन्यौल र तनावमा रहँदा उनीहरुबाट आएका अभिब्यक्तिले उनीहरुको बोली र ब्यबहारविचको विभेद छर्लङ बनाएको छ ।
निवार्चीत जनप्रतिनिधी जो हिजो महिला मुक्तिको नारा उराल्र्दै बन्दुक बोकेर सामन्ती सत्ता ढाल्न हिडेका थिए उनको यस्तो अभिव्यक्ति ! बडो दुखका साथ भन्दैछु, हामीले कस्तो तुच्छ सोच भएकाहरुलाई निर्वाचित गरेछौँ ?
सत्ताधारी नेकपा, प्रमुख प्रतिपक्ष काँग्रेस मात्र हैन अन्य दलमा पनि महिला सांसदको संख्या राम्रै छ । तीन तहकै सरकारमा रहेका महिला प्रतिनिधि हेर्ने हो भने एक तिहाई पुग्छ । भुषाल र घर्ती मात्रै हैन यो केसमा ती सबै मौन छन् । दलिय प्रभावमा महिला मुद्धामा लागेको बुझो दुखदायी हो । मुक्तिको नारा लगाउनेहरु आफैं दास बनेको कस्तो नमिठो दृष्य ।
हाम्रो कानुनले अनौपचारिक सम्बन्धबारे मात्रै औपचारिक सम्बन्धबारे समेत बोलेको छ । नेपालको कानुन अनुसार विवाह पश्चात असहमतीमा हुने यौन सम्वन्धलाई समेत बलात्कार मान्छ ।
तर महरा ती पीडित महिलाविच पहिल्यैदेखि सम्बन्ध रहेको र अहिले कुरा नमिलेर बाहिर आएको तर्क गरेर गम्भिर गम्भिर घटनालाई सामान्यीकरणको अभ्यास भइरहेको छ । यदी यी दुबैविच पहिल्यै देखि सम्वन्ध रहे पनि अहिले जुन प्रकृतीको घटना भएको सार्वजनिक भएको छ त्यो दण्डनिय नै हो ।
हैन र सांसद महोदय ?
एक पुर्व आइजीपीसँगको कुराकानीमा कसरी पारस शाहको सवारीले निधन भएका गायक प्रविण गुरुङको हत्यामा भक्तपुरका सोझा नेवार फसाइएका थिए भन्ने खुलेको थियो । अहिले त्यही कुरा झलझल्ती दिमागमा घुमिरहेको छ ।
हिजो राजतन्त्र भएको बेलामा भएको त्यो घटना सत्ता प्रभावकै बलमा दबाइएको सत्य लुकेको छैन अझै ।
राजतन्त्र ढल्यो । तर सत्ता र शक्तिको उपयोग गरेर गम्भिर अपराधमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिने र पीडितलाई नै उल्टो दोषी देखाउने अभ्यास संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रमा पनि जारी रहेको महरा प्रकरणले देखायो ।
कुन प्रकारको अपराध भनेर हेर्न छाडेर कहिलेसम्म आफ्नो पार्टीको संलग्न कि अर्काको हेरेर सोही अनुसार ब्यबहार गरिरहने ?
दलिय संलग्नताको आधारमा कोही निर्दोश हुने, केही दोषी हुने सामन्ती कानुनी ब्यवस्था कहिलेसम्म भोगिरहनुपर्ने ? पीडकको प्रभावका कारण कहिलेसम्म पिडितले बयान फेरिरहनुपर्ने ?
केसी फलोअप : कर्मचारी फेरिदा छानविन सुस्त
जेठा छोराका दुई छोरा सचित र सचिन केसीलाई कान्छा छोराका सन्तान बनाएर जापान पठाउन कागजात बनाउन संलग्न देखिएका पूर्वउपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीको अपराधबारे छानविन गर्न बनेको समितिले छिटो काम नहुनुमा कागजात बनाउन संलग्न कर्मचारीको अवकाशले अप्ठेरो पारेको जनाएको छ।
काठमाडौंमा मिस्टर एन्ड मिस रौनियार २०१९ सम्पन्न भयो। प्रतियोगितामा आशीष गुप्ता मिस्टर रौनियार भए भने प्रिया गुप्ता मिस रौनियार बनिन्।